Le yindlela iMeizu M6 ejongeka ngayo, ifowuni elungileyo, entle nexabiso eliphantsi | Iindaba zeGajethi
Kungekudala simfanyekiswe kukumiliselwa kwee-smartphones eziphezulu, i-Galaxy S8 yandulelwa yiNqaku 8, phakathi kwe-LG G6 kunye ne-V3, Ngelixa iNqaku 8 lalifuna ukuthweswa isithsaba liphumelele ngaphambi kokubonakala kwe-X X kodwa ... Akuyena wonke umntu onomdla kwi-high-end telephony, ukusebenza kakuhle okuphantsi kukude ukuhlala.
Umzekelo ocacileyo yi IMeizu M6, inkampani yaseTshayina iveza esi sixhobo sikwaziyo kwaye esifikelelekayo kuninzi lweepokotho. Siza kwazi kancinci ngokunzulu ukuba yintoni le nto ibalaseleyo ye-smartphone.
Kwaye kuye kwaba yindlela ephantsi apho kuya kuba nzima kakhulu ukulwa nayo, nangona iyaqhubeka noyilo ebelutsala iminyaka emininzi, nangona eli xesha litshintshe isinyithi se-polycarbonate, ukuthoba iindleko. Ummangaliso wokuqala kukuba iya kunyusa i- IMediaTek Helio P10 ene-2 ​​okanye i-3 GB ye-RAM kuxhomekeke kwinto esiyikhethayo. Ngokufanayo ukugcinwa kwangaphakathi kuya kwahluka phakathi I-16 GB kunye ne-32 GB, iyandiswa ngekhadi le-SD elincinci. Ezi ikakhulu ziidatha esiziphetheyo malunga neMeizu M6 ethi phakathi kwezinye, ithengiswe ngombala ohlaza okwesibhakabhaka ongekabonwa, ngesiphelo sesinyithi esimnandi.
Iimpawu zeMeizu M6
Ikhamera ye-13MP ngasemva
Ikhamera yangaphambili ye-8MP
2,070 mAh ibhetri
5,0 intshi HD screen
Eyona nto ibaluleke kakhulu yile Inguqulelo ye2GB iya kudanisa ijikeleze i- € 85, Ngelixa lika I-3 GB kunye ne-32 GB ehambelanayo ukugcinwa kwangaphakathi kuya kufumaneka ukusuka nje € 114, ifowuni eya kuthengiswa kwiAmazon umzekelo kwaye kuya kuba nzima ukuyichasa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Nantsi indlela ebukeka ngayo iMeizu M6, ifowuni elungileyo, entle nexabiso eliphantsi